Yakachipa ekugadzira zvikamu kabhoni simbi fekitori uye vatengesi Ouzhan
Nokuchengetedza zvikamu kabhoni simbi
Carbon simbi ndeye iron-kabhoni chiwanikwa chine kabhoni zvemukati me0.0218% kusvika 2.11%. Iyo inonziwo kabhoni simbi. Kazhinji, zvakare ine shoma shoma yesilicon, manganese, sarufa, uye phosphorus. Kazhinji, iyo yakakwira iyo kabhoni yezvinhu yesimbi kabhoni, inowedzera kuomarara uye inowedzera simba, asi iyo yepasi ipurasitiki. Carbon simbi CNC yekuchengetedza inoshandiswa zvakanyanya uye inokodzera zvikamu zvakawanda zvemishini.
Carbon simbi yekuchengetedza-chaiyo kabhoni simbi yekugadzira zvikamu zvemuchina nzvimbo
Ouzhan ichaita zvehunyanzvi kugadzirisa zvigadzirwa zvemuchina zvinoenderana nemadhirowa ako nezvinodiwa. Nokuchengetedza ndiyo kugadzira nzira inoshandisa nokuchengetedza michina kushandisa kumanikidza simbi blanks kubudisa epurasitiki deformation kuwana forgings nevamwe zvokuimba zvivako, zvimwe zvitarisiko uye hukuru. Kugadzira (kuumba uye kutsikisa) ndechimwe chezvinhu zviviri zvikuru. Kugovera kugadzirwa ndeimwe yenzira huru dzekugadzirisa nzira dzekupa michina zvikamu zvisina kukwana muindasitiri yekugadzira indasitiri. Kubudikidza nekugadzira, kwete chete chimiro chemakanika zvikamu chinogona kuwanikwa, asiwo chimiro chemukati chesimbi chinogona kuvandudzwa, uye meyikitori nemuviri zvimiro zvesimbi zvinogona kugadziridzwa. Kazhinji, zvakakosha zvikamu zvemishini zvine kushushikana kwakanyanya uye zvakakwirira zvinodiwa zvinogadzirwa nekugadzira nzira dzekugadzira. Zvikamu zvakakosha senge turbine jenareta shafti, ma rotors, ma impeller, mashizha, maringi ekurinda, mahydraulic makuru ekutsikirira macolumbers, akakwirira-ekumanikidza masilinda, anokungurutsa mill rolls, emukati anopisa injini crankshafts, ekubatanidza matanda, magiya, mabheyari, uye zvombo zvehondo muindasitiri yekudzivirira nde zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa.
Zvakanakira kabhoni simbi ndokugadzira zvikamu
-Iva nechokwadi chekuenderera kwesimbi fiber musangano
- Kuvandudza masimba epanyama esimbi
- Natsiridza epurasitiki uye zvemaziso ehupfumi esimbi
OEM simbi kabhoni simbi yekuchengetedza sevhisi-China Shanghai CNC kabhoni simbi yekugadzira zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa kabhoni simbi ine yakagadzika uye yakavimbika yepamusoro-chaiyo CNC yekugadzira zvikamu. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika.
Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwekabhoni simbi yekugadzira michina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yekugadzira kabhoni simbi zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidza mutengo masevhisi ekabhoni simbi CNC yekugadzira zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Ouzhan kabhoni simbi ndokugadzira zvikamu zvinogadzirisa zvikamu zvakanakira
(1) nokuchengetedza zvakakodzera kuti kugadzira siyana yomukati uye dzokunze chinotenderera hukawanika. Mhando yekugadzira kugadzira kurongeka ndeye zhiIT13, IT6, uye iyo yepamusoro rough Ra kukosha ndeye 12.5 ～ 1.6.
(3) yekuchengetedza ine yakasimba inochinjika kune chimiro, zvinhu, zvigadzirwa zvekugadzira, nezvimwe zveiyo workpiece, uye inoshandiswa zvakanyanya. Kunze kwekugadzira simbi dzakasiyana siyana, simbi yakakandwa, uye nesimbi-isimbi, inogona zvakare kugadzira zvisiri-simbi senge fiberglass, bakelite, nylon uye zvichingodaro. Kune dzimwe dzisiri-simbi simbi dzisina kukodzera kukuya, madhaimani ekushandura maturusi anogona kushandiswa ekugadzira zvakanaka, ayo anogona kuwana yakakwira machining kunyatsoita uye diki pamusoro peyakaomarara tsika.
(4) Kunze kwekusaenzana kwepamusoro peiyo isina chinhu, akawanda kukanganwirwa anoramba achicheka akaenzana kucheka muchinjikwa chikamu. Naizvozvo, iyo yekucheka simba inochinja zvishoma, iyo yekucheka maitiro akatsiga, inoenderana nekukwirisa-kumhanya uye kucheka kune simba, uye ine yakakwira kugadzirwa kushanda.
Zvakanakira Ouzhan Carbon Simbi yekuchengetedza Service
-Yese chaiyo CNC yakagadzira kabhoni simbi zvigadzirwa zvinoenderana nekuomarara kwemhando yekuongorora.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo kabhoni simbi yekugadzira zvikamu.
Pashure: OEM Hot Extrusion Ndokugadzira Zvikamu
Zvadaro: Yakasarudzika kabhoni simbi ndokugadzira zvikamu
Foring zvikamu Stainless simbi
Customized Stainless simbi ndokugadzira zvikamu mechani ...